Lavender | January 2020
Isticmaalka sifooyinka bogsashada ee lavender ee daawada dadweynaha
Ugu Weyn Ee Lavender
Xitaa waqtiyada qadiimiga ah ee Rome, waxaa loo yaqaanaa oo ku saabsan guryaha bogsiinaya qubeyska. Waxaa lagu daray barkadaha iyo biyaha gacmaha lagu dhaqo, maadaama lagu tiriyo guryaha lidka bakteeriyada. Sidoo kale, thanks to dhadhanka basbaaska, waxaa loo isticmaalay oo maanta loo isticmaalo karinta iyo sameynta cabitaanada. Laga soo bilaabo waqtiyadii hore ilaa maanta, lavender, sababtoo ah xaqiiqda ah in uu leeyahay guryaha bogsiin wanaagsan, waxaa si ballaaran loo isticmaalaa daawada dhaqameed.
Carafka macaan, arxan la'aan, muuqaal qurux badan iyo dalabyo noocyo kala duwan ah ayaa muddo dheer ka dhigay dhadhanka dhirta ugu caansan. Wixii iyada ah, waxaa jira siraha daryeelka. Waa maxay shuruudaha loo baahan yahay si loo abuuro warshad si ay u noqoto qurxinta dhabta ah ee beertaada, iyo sida loo koro a lavender ka soo abuur?
Shimbiraha Egotical Beauty - Digaagga Paduan
Barashada noocyada tufaaxa: dhulka hoostiisa ah, Brazilian, mugdi madow, caarad dhuuban iyo kafateer guri
Ma inaan bixiyaa digaagga lafaha
Dhadhami caan ka yahey caruurnimada - pear "Lemon"
"Pharmaceuticals" carrada, koriinka geedaha basbaaska ee kiniinnada peat
Nooc kasta oo beerta, haddii uu yahay asaxan ama beerta khibrad leh waxay doonayaan in ay ku beeri goobaha noocyada ugu fiican ee tamaandhada. Si aad u xoojiso jirka oo leh fitamiino markaad isticmaaleysid yaanyada cusub, iyo diyaargarowga xilliga qaboobaha ee foomka saliidda, suugada, saladh jiilaalka. Liiskaan, Tina TJT's yaanyada ayaa badanaa laga helaa. Read More
Hilibka yaanyo: Gigolo noocyo kala duwan ah
Tilmaamaha tallaabo tallaabo ah oo ku saabsan sida si habboon loo xoqdo oo loo gooyo pelargonium
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Lavender 2020